Mid kamida Culimada sacuudiga oo ku Fatwooday in Naagaha Muslimiinta ay Naaskooda Jiqsiin karaan Rag ka ajnabi ah
» Mid kamida Culimada sacuudiga oo ku Fatwooday in Naagaha Muslimiinta ay Naaskooda Jiqsiin karaan Rag ka ajnabi ah
Written By RG on Saturday, January 22, 2011 | Saturday, January 22, 2011
Khilaaf diineed ayaa ka soo if baxay dalka “Sucuudiga” ka dib khudbadii Jumcada ee uu Sh Sudeys ka Akhriyey Xaramka Makkah asaga oo dalbaday in Fatwada laga xiro oo laga joojiyo dad uu ku tilmaamay in ay ismoodeen Culimo kuwaas oo ka baxay dariiqii Jamhuurta umadda iyo Jamaacadeedaba.
Sh Sudeysi oo adeegsaday hadalo aad u kulul ayaa dhaleecayn ba’an u jeedinayey Cabdul Muxsin Cubaykaan oo Fatwooday in ay u banaan tahay gabadha Muslimadda ahi in ay Nuujin karto nin weyn oo ajnabi ka ah iyo sidoo kale Shiikh Caadil Al kalbaani oo ah imam ka mid ah Imaamyada Xaramka oo asaguna dhawaan Fatwooday in ay banaantahay dhagaysiga Heesuhu.
Sh Sudeysi ayaa Culimadaas ku tilmaamay in ay yihiin rag aan mudnayn in ay Fatwoodaan Su’aal diin ku saabsana ka hadlaan arimaha Fiqiga ah waxana uu sheegay in ay yihiin rag doonaya in ay xoogsadaan Maqaamka Fatwada asaga oo dhanka kalena codsaday in raggaas loo diido in ay Fatwoodaan.
Labada Fatwo ee ka soo kala baxday Cabdil Muxsin Cubaykaan oo ah xubin ka tirsan galaha shuurada ee dalka Sucuudiga iyo Caadil Al Kalbaani oo ah Qaari Caan ka ah dunida Muslimka kana mid ah Imaamyada Xaramka Makkah ayaa maalmihii ugu dambaysay waxay dood iyo falanqayn ka kiciyeen dunida oo dhan gaar ahaana dalka “Sucuudiga”.
Dhanka kale Cubaykaan ayaan asaguna ka yaraysan Sudeysi waxana uu sheegay in uusan u aaba yeelayn hadalka ka soo yeeray Sh Sudeysi waxana uu si Sukhriyo ah u sheegay in ay jiraan dad Jaahil ka ah Musdalaxaatka Sharciga asaga oo ula jeeday Musdalaxa (XIJRIGA) oo ah qofka in loo diido in uu ku tasarufo maalkiisa, ereygaas oo ahaa midkii uu Sh Sudeysi dalbaday in lagu sameeyo Cubaykaan.
Cubaykaan ayaa asaga oo u waramaya TV-ga al Carabiya waxa uu yiri “Dadka garanaya Macnaha XIJRIGA(ka joojinta) waxa ay garanayaan in uu yahay in laga joojiyo qofka caqliga gaaban in uu Maalkiisa ku Tasarufo sida ilmaha yar-yar iyo qofka weyn ee aan maalkiisa u isticmaali karin si wanaagsan, Laakiin Zamankaan waxaa dadkii ku batay Jahligii illaa ay noqdeen kuwa aan kala garanayn Musdalaxa Sharciga ah ee Fiqiga markaas ayey iskaga hadlayaan hadal aysan fahmayn macnihiisana aysan garanayn”.
Sh Sudeysi ayaa Khudbadiisii Jumcada ku codsaday in Fatwada laga joojiyo raga ismooday in ay Culimo yihiin asaga oo dhanka kalena sheegay in raga noocaan oo kale ah joojinta Fatwada laga joojiyaayi ay ka muhiimsan tahay qofka Safiiha ah oo Maalkiisa in uu ku tasarufo laga joojiyo.
Sh Sudeysi ayaa sheegay in raggaan aysan ka Fatwoon karin masaa’isha yar yarka ah iskaba dhaafe masaa’il sidaan u waaweyne.
Sh Sudeysi waxa uu xusay arimo uu ku tilmay in ay yihiin wax cid walba oo Muslim ah ay garanayaan iskaba daaye qof caalim ah arimahaas oo uu ka xusay Heesaha oo la baneeyo laguna sheego in dhagaysigoodu uu xalaal yahay, Nuujinta weyn oo loola jeedo in gabadha Muslimadda ahi ay Naaskeedu u dhigi karto nin weyn oo Ajnabi ka ah, Qofka sixran oo lagu daaweeyo Sixir kale iyo sidoo kale is dhex galka Ragga iyo Dumarka Ajaanibta kala ah ( Ikhtilaadka).
Cubaykaan ayaa ah nin caan ku ah Fatwooyinka Shaadka ah oo aan looga horeyn, waxana uu xubin ka yahay golaha Shuurada ee dalka “Sucuudiga” waxana uu hadda ka hor Fatwooday in ay waajib tahay in dadka ku nool dalka Ciraaq ay adeecaan amarkiisana u hogaansamaan Paul Bremer oo ahaa ninkii ay Maraykanku u magacaabeen dalka Ciraaq ka dib markii ay qabsadeen.
Cubaykaan ayaa sheegay in aysan caalamka ka jirin haatan wax Jihaad ah ,loogana baahan yahay Shucuubta Muslimiinta ahi in ay adeecaan Xukaamtooda asaga oo xusay Rag ay ka mid ahaayeen Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka Ciraaq Iyyaad Callaawi, Xaamid Karazaay iyo Maxamuud Cabbaas.
Cubaykaan ayaa sidoo kale Banaayey waxa loo yaqaano RAQSIGA oo ah Niikada ama Jaaska la sameeyo xafladaha arooska waxana uu shaashadaha caalamka ka soo dhex muuqday asaga oo Jaasaya.
Sidoo kale Cubaykaan ayaa Fatwooday in ay banaantahay in loo heeso calanka loona istaago .
Sanadkii 2005-tii markii Joornaal ka soo baxa dalka Denmark uu aflagaado u geystay Nabi Muxamed SCW ayey qaar ka mid ah Culumada “Sucuudigu” waxa ay Fatwoodeen in cunaqabatayn lagu soo rogo wax yaalaha lagu sameeyo dalka Denmark si ay cudurdaar uga bixiyaan aflagaadadaas hase ahaatee Cubaykaan ayaa Fatwadaas ganafka u tuuray sheegayna in aduunku uu hormar gaaray oo aan loo baahnayn in Fatwadaan oo kale la soo saaro.
Halkaan ka akhri Cubaykaan oo Fatwoonaya in Gabadhu nin weyn Nuujin karto
CeelbarafNet Aragti Cusub iyo Wadaninimo Maamulaha Shabakadda
Guidance for Understanding Islam6/03/2011Walaalayaal aynu hubino buugagta, cajaladaha, fataawooyinka Islamka markaynu akhriyayno ama dhagaysanayno; qofka qoray ama diyaariyay darajadiisa iyo sifooyinka uu leeyahay insha allah...Insha allah Illaahay dhamaanteen ha inagu toosiyo dariiqa saxda ah, Illaahay ha soo hanuuniyo culimada Shariicada Islamka majaro-habaabinaayana...AamiinReplyDeleteAdd commentLoad more...